Lego Star Wars UCS 75313 ကို AT-AT ကိုအတည်ပြု?
22 / 07 / 2021 22 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 703 Views စာ0မှတ်ချက် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer, ၇၅၃၀၈ R75308-D2, 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, AT-AT, Lego, Lego ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု, Lego ကောလာဟလများ, Lego Star Wars, LEGO.com, Reddit, ကောလာဟလာ, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, UCS, UCS ကို AT-AT, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး
အဆိုပါ Lego Group ၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်ကောလာဟလသတင်းများအရ Ultimate Collector Series ၇၅၃၁၃ AT-AT တပ်ဆင်ထားသည်ကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော UCS ၏စကားလုံးသည် Imperial Walker ကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပထမဆုံးဆိုက်ရောက်ခဲ့သည် နောက်ကျောဇန်နဝါရီလခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၆,၇၈၂ ဒေါ်လာနှင့်ဈေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၈၀၀ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် UCS ၏ဒုတိယတစ်ဝက်ဖြန့်ချိသောစျေးနှုန်းဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာအတိုင်းဖြစ်သည်။75192 ထောင်စုနှစ် Falcon) နှင့် 2019 (75252 မှာ Imperial စတား Destroyer).
Redditor TrooperNI ယခုတစ် ဦး နှင့်အတူစကားပြောဆိုမှု၏ဖန်သားပြင်မျှဝေခဲ့သည် Lego သွယ်ဝိုက် 75313 AT-AT ၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုစေခြင်းငှါဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်။ ကျိုး p အစားထိုးအကြောင်းကိုစံစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပြီးနောက်arts, သူတို့စုံစမ်း: "ငါ 75313 AT-AT set ကိုအကြောင်းကိုမေးနိုင်သလား, ဒီတစ်ဖြစ်လိမ့်မည် Lego စတိုး သီးသန့်လား?”
'75313' Ultimate Collectors AT-AT 'ထွက်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ LEGO ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်မေးမြန်းခဲ့သည်။ မှတ်ချက်များအတွက်ပိုမိုအချက်အလက် မှ မင်္ဂလာပါ
ထို့နောက်ကိုယ်စားလှယ်ကဤသို့တုံ့ပြန်ခဲ့သည် -“ ဒါကပြောင်းလဲနိုင်တယ်၊ ဒီအချက်အလက်မရှိသေးဘူး။ ၎င်းသည်လုံးလုံးလျားလျားအတည်ပြုခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ၇၅၃၁၃ AT-AT သည်အနည်းဆုံးကုမ္ပဏီ၏စနစ်များတွင်ရှိသည်ဟုအကြံပြုထားသည်။
TrooperNI အဘို့အဖိ အသေးစိတ်စျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲအပါအ ၀ င်အေးဂျင့်ကမူ“ အများပြည်သူသိရှိနိုင်သည်အထိသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကိုကြေငြာခွင့်မပြုဘူး။ ” အဆင်ပြေပါတယ်၊ တရားမျှတပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ကြေငြာစရာတစ်ခုခုအမှန်တကယ်ရှိကြောင်းအတည်ပြုခြင်းလိုမြည်လား?
UCS ၏ကောလာဟလများ မူလကပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် ၏သတင်းအဖြစ်တစ်ချိန်တည်း (နှင့်တူညီသောအရင်းအမြစ်မှ) ၇၅၃၀၈ R75308-D2 နှင့် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunshipဟောကိန်းထုတ်အဖြစ်ထွက် panned နှစ်ခုလုံးသော။ 75313 AT-AT သည်သေချာသည့်အရာတော့မဟုတ်သေးပါ၊ သို့သော်ဆိုင်းဘုတ်အားလုံးသည်ကြီးမားသောမီးခိုးရောင်လေးခြေထောက်များဖြင့်ညွှန်ပြနေပါသည်။
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Enfys Nest
Lego Marvel Shang-Chi set ကိုအနာဂတ်လက်ဆောင်နှင့်ဝယ်ယူမှုအဖြစ်အတည်ပြုသည် →